Rita, Writing for My Sake!: ... ဖတ်ဖို့
Posted by Rita at 10/29/2009 03:21:00 PM
ဟုတ်တယ် ကိုယ်လဲ စာအုပ်လေးတွေမှာ dedication မပါရင် မကြိုက်ချင်ဘူး...
ကိုယ်တိုင်ဝယ်တဲ့ စာအုပ်တွေဆိုရင်တော့ ချက်ချင်းလက်မှတ်ထိုးပစ်လိုက်တာပဲ....
Right! You gotalot of knowledge and wise by reading books.
As you know Knowledge is power.
"...ဖတ်ဖို့" ဆိုတာ ချစ်တယ် လို့ ပြောတာ ဆိုတဲ့ အတွေးမျိုးကို ဖျတ်ခနဲ တွေးမိနေတုန်းပဲ။
အဲဒီဖတ်ဖို့ဆိုတာထဲမှာ နွေးထွေးမှုနဲ့ချစ်ခင်မှုတွေပါတယ်လို့ခံစားရတယ်...တို့လည်းစာအုပ်ကြိုက်တယ်..။ငယ်ငယ်ကတည်းက ဖတ်ဖို့စာအုပ်ရပြီဆိုရင် လူကြီးတွေမြင်ရင် ခေါ်ခိုင်းနေမှာစိုးလို့ တံခါးရွက်နဲ့နံရံကြားထဲဝင်ပုန်းပြီးတော့ကိုဖတ်တာ... ပြောစမှတ်ကိုဖြစ်ရော.. :)))
ကျွန်တော်လဲ ညီအကို မောင်နှမ အနီးအနားမရှိဘဲ အိမ်မှာ အဖေအမေနဲ့ စာအုပ်တွေကြား ကြီးပျင်းခဲ့ရ
စာအုပ်တအုပ်ဖြစ်ဖြစ်၊ စာစောင်တခုဖြစ်ဖြစ် အသစ်ရရင် တမြတ်တနိုး အားရပါးရ နမ်းရှုံ့ပြီးမှ ဖတ်လေ့ရှိတယ်(ကျောင်းစာအုပ်မပါ)
အမငယ်ငယ်ကလဲ အဲလိုပဲ လူကြီးဖတ်ပြထားတာတွေ မှတ်မိအလွတ်ရပြီး ကိုယ်ပဲ ဖတ်တတ်သလိုနဲ့ သေချာ ဖတ်ပြတတ်တယ်တဲ့။ စာရွက်လှန်တာတောင် အတိအကျဆိုပဲ .. လူကြီးတွေ ပြန်ပြောပြတာပါ.. အမလဲ စာအုပ်သရဲ။ စာအုပ်ဖတ်နေရင် ကိုယ့်အနားဘာလာပြောပြော မကြားတော့ဘူး။ နောက် မဂ္ဂဇင်းတွေ ငှားဖတ်တုန်းကဆို တရွက်မကျန်ကို ဖတ်တာ...
အရီးတောင်း မြေးမ အရီးတား
အဲ သူလူပ်တာနဲ့ ကိုယ်တောင် ရင်ထဲမှာ ဘာညာဘာညာ ဖြစ်သွားပြီ
အဲ့လို....ဖတ်ဖို့ ဆိုတာ ပြောတော့
ဖလမ်းဖလမ်း ဖြစ်တဲ့ ဆယ်ကျော်သက် အရွယ်တွေပေါ့
ကိုယ်ကတော့ ငယ်ငယ်ကတည်းက ဘိုမ ဆိုတော့ ဘိုလိုပဲရေးတယ် (ဖိုးသူတော် တဖြစ်လဲ ကိုတုတ်ကြီးတွေ့သွားရင် လာပြောနေအုံးမယ် ဘိုလမ်းနီးတယ်လို့)
downn to the vally
ငယ်ငယ်က မီးမွားစ်တွေမှာ ပျော်စရာတွေရှိရင် ကလေးဘဝက အချစ်ကို ကောင်းကောင်းရခဲ့လို့တဲ့ ကြားဖူး ဖတ်ဖူးတယ်
woooo nice essay, fantastic feeling
ခပ်တည်တည်ရုပ်နဲ့ စာရွက်တွေ တရွက်ပြီး တရွက် လှန်ဖတ်နေမယ့် ပုံ မြင်ယောင်သွားတယ်... ချစ်စရာလေး နေမှာ... တို့လည်း ငယ်ငယ်က သူများအိမ်သွားလည်ရင်တောင် ဖတ်လက်စ စာအုပ် မပြီး ရင် မထချင်ဘူး... မှတ်မှတ်ရရ အဖေက ခါးပတ်နဲ့တောင် ဆော်ဖူးတယ် ဂျီကျလို့လေ
ကိုယ်လည်း စာဖတ်နေရရင် ထမင်းမေ့ဟင်းမေ့ဘဲ...
ဟုတ်သားပဲလေ။ ချစ်တယ် ဆိုတဲ့ စေတနာလေး ပါနေတယ် ထင်တာပဲ။
ရီတာဖေဖေက ပုံပြင်လေးတွေ ထွင်ပြောတယ်လား…
သားဆီမှာ ကိုယ်ပြုပြင်စေချင်တဲ့ အမူအရာတခုတွေ့ ရင် ဒီတိုင်း မလုပ်နဲ့ လို့ဆုံးမတာထက် ပုံပြင်လေးနဲ့ ပြောပြတာ သားက နားပိုဝင်သလိုပဲ…
သားကို ပြောပြတဲ့ လက်ဖြစ်ပုံပြင်လေးတွေကို ပို့ စ်တခုတောင်ရေးမလို့ စဉ်းစားနေတာ…
ရီတာ… “ဖတ်ဖို့ ” လေ…
ငယ်ငယ်က အမေနဲ့ အဒေါ်က ဖတ်ဖို့ စာအုပ်တွေ ရွေးပေးခဲ့တယ်။ သူတို့ အကျင့်လုပ်ပေးလို့ ခုတော့ စာအုပ်တွေကို ချစ်မြတ်နိုးလာခဲ့တယ်...
ဒါဆို ချစ်သူတွေ ချစ်တယ်လို့ပြောရင်တောင်...
"ကို မင်းကို... ဖတ်ဖို့..." ပြောကြမယ်ထင်တယ်...
ဒါဆို ကောင်မလေး ပြန်ပြောနိုင်တာက...
"ဟင်.. ဘာကြီးတုန်း" ဆိုတာမျိုးပေါ့...
ခေါင်းစဉ်လေး ကြည့်ပြီး အော် တစုံတဦး...ဖတ်ဖို့ ရေးထားတာနေမှာလို့ တွေးထင်လိုက်တာ...
...ဖတ်ဖို့ က မသီတာ အတွက်ကိုး
...ဖတ်ဖို့ က အားလုံး အတွက်ကိုးးး